Xuska dhalashada Nabigeena Muxamad (NNKH) oo lagu qabtay Caabudwaaq – Radio Muqdisho
Xuska dhalashada Nabigeena Muxamad (NNKH) oo lagu qabtay Caabudwaaq
Munaasibad lagu weyneynayey dhalashada Nabigeenna Muxamad (NNKH) ayaa lagu qabtay degmada Caabuq-waaq ee gobolka Galgaduuud.
Culimaa’udiinka degmada iyo qeybaha bushada ayaa ka qeyb galay munaasad lagu soo dhaweynayay dhalashada Nabigeenada Muxamad (NNKH), iyadoo dadkii ka qeyb galay ay socod dheer ku mareen xaafadaha kala duwan ee degmada.
Garoonka kubadda cagta ee degmada Caabud waaq ayaa lagu qabtay xaflad lagu weyneynayay dhalashada Nabigeena Muxamad (NNKH).
Sheekh Shuuriye oo ka mid ah culimada ku nool gobolka Galgaduud ayaa ka sheekeeyay taariikhda Nabigeena Muxamad (NNKH), waxaana uu ku baaqay in laga wada qeyb qaato xuska dhalashada Nabiga.
“Waa sanadkii 58aad ee ay dhisantahay magaalada Caabudwaaq, laga soo bilaabo xilligaasi culimada iyo qeybaha bulshada ee degmada ku dhaqan waxa ay sanad waliba xillgan oo kale ay xusaan dhalashada Nabigeena Muxamad (NNKH), waxaan Alle ka baryaynaa in Ummadda Soomaaliyeed ay midoobaan” ayuu yiri Sheekh Shuuriye.
Culimada ayaa u rajeeyay bulshada Soomaaliyeed in sanadkan kiisa kale ay ku gaaraan horumar iyo baraare, waxaana ay ku baaqeen in shacabka .